थप कडाई गर्दै थपिने भयो काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा ! – List Khabar
Home / समाचार / थप कडाई गर्दै थपिने भयो काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा !
admin July 26, 2021 समाचार Leaveacomment 48 Views
काठमाण्डु, १० साउन– काठमाडौँ उपत्यकामा यही २० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आजको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । थपिएको आदेश सोमबार बिहान १ बजेदेखि लागू हुनेछ ।
Previous राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ‘लाजमर्दो भिडियो’ ! एकजना पक्राउ
Next करोडौँको गाडी चोर्दै बेच्ने नेपाली सेनाका जवान पक्राउ, चोर्ने तरिका पनि अनौठो